Isichumiso for Izikhongozeli elinegadi - China Qingdao uKumkani Good New Materials
Herbs ezikhuliselwe kwizikhongozeli baya kufuna isichumiso ngaphezu kwezo likhule egadini. Kungenxa yokuba kungekho ndlela makasizalise izondlo abayisebenzisayo njengoko bekhula. Kodwa ungakhathazeki, akukho mfuneko yokuba uthenge isichumiso entle ngokukhethekileyo izikhongozelo zakho, ungasebenzisa isichumiso efanayo zitiya imifuno kwiziphathi zakho! Iingcebiso zam phezulu ukukhululwa olucothayo eziphilayo ukuze imifuno ezikhuliselwe izikhongozeli iphilile Lima organic imifuno isichumiso kunye Sustane konke ukutya izityalo zendalo.
Post eziyeleleneyo: Izikhongozeli garden ukukopela sheet
Kuba izikhongozeli, ukuba luluvo olulungileyo ukongeza ukukhululwa kade granules umanyolo eziphilayo kungena isingxobo, ngokunjalo usebenzisa amanzi isichumiso enyibilikayo lonke eli xesha lokukhula. Ungadibanisa uyekelelo olucothayo imifuno organic umyezo isichumiso emhlabeni phambi kokutyala imifuno yakho, okanye u nga kutshiza granules phezu komhlaba bonwaye kwindawo ukungcola emva kokutyala
n ukongeza okubamba ukukhululwa granules, ungasebenzisa amanzi nezichumiso ezinyibilikayo kwizikhongozelo zenu lonke eli xesha lokukhula ukugcina imifuno yakho ezomeleza. Amanzi izichumiso awonayo omkhulu zokunikela imifuno yakho oyongela ekhawulezayo izondlo, kodwa ezisetyenziswa phezulu (okanye wahlamba ngaphandle kwembiza) ngokukhawuleza ngoko ke kufuneka ukuba isetyenziswe rhoqo.
Post eziyeleleneyo: 5 tips ezikhulayo pepper ezinkulu
amanzi uhlobo isichumiso wam owuthandayo enyibilikayo zitiya imifuno ezi iintlanzi emulsion kunye neti umgquba. Enoba ezi eziphilayo umsebenzi omkhulu ukugcina iigadi isikhongozeli imifuno ezomeleza ihlobo lonke. Kodwa akukho mfuneko yokuba ingxolo enkulu ngenxa ukondla imifuno yakho ikhule umgqomo kwi ucwangciso rhoqo, ngoko musa ungakhathazeki ukuba uthe wamlibala eli nyathelo.
Herbs ezikhuliselwe izikhongozelo kuya kufuneka ukhathalelo kunye nesichumiso ngaphezu imifuno elinywa egadini. Kodwa ukusebenzisa isichumiso lweegadi imifuno kunye neenkonkxa kulula, ingakumbi ukuba uqala rich, umhlaba eziphilayo kwaye usebenzise nezichumiso zendalo.